चन्द्रागिरि केबुल कारमा मानिस झुण्डिएको झुण्डियै – Pokhara Hotline News
चन्द्रागिरि केबुल कारमा मानिस झुण्डिएको झुण्डियै
By Pokhara Hotline	 On २०७८ चैत्र १६ गते बुधबार ११:२२
काठमाडौंको चन्द्रागिरि केवुलकार बिग्रिन पुग्दा केबुलकारमा अड्किएकाहरुलाई प्रहरी, चिकित्सक र नर्सहरु परिचालन गरेर उद्धार गर्नु परेको छ । प्राविधिक कारणले कारहरु केबुलमै अड्किन पुगेको र आधा घण्टापछि जेनेरेटर चलाएर कारहरु सञ्चालन गरिएको चन्द्रागिरि केबुलकारले जनाएको छ । तर उद्धारकर्ताहरुले भने उद्धारको काम सकाउन करिब ३ घण्टा लागेको बताएका छन् ।
उद्धारमा थानकोट प्रहरी प्रभागबाट डीएसपी र दुई इन्स्पेक्टरसहितको टोली खटाइएको थियो । उनीहरुका अनुसार जेनेरेटर चलाइसकेपछि केबलकारहरु निकै सुस्त गतिमा अघि बढेका थिए । एउटा केबुलकारलाई अरु बेला ९-१० मिनेट लाग्नेमा प्राविधिक गडबडीपछि ३० मिनेट लागेको थियो ।
घटनास्थलमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले केबुलकारमा थुनिन पुगेका ३७ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । तारमै अड्किन पुग्नाले यात्रीहरु आत्तिएर धेरैजसो बोल्न नसक्ने अवस्थामा पाइएका थिए । बोल्नेहरुले केबुलकारमा गडबडी रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
चन्द्रागिरि हिल्स प्रा. लि. ले केबुलकारमा उत्पन्न गडबडीलाई सकेसम्म प्रचारमा ल्याउन नचाहेको र थुनिएका यात्रीले पनि आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न सकेका छैनन् ।
करीब ४ सय जनालाई चन्द्रागरिको डाँडामा छोडिसकेपछि केबुलकार रोकिन पुगेको थियो । अड्किएकाहरुको उद्धार गरेको केही समयपछि कारहरु नियमित सञ्चालन भएका थिए । त्यसपछि डाँडामा रोकिएका करिब चार सय जनालाई फर्काइएको थियो ।
केबुकार बिग्रिनुको वास्तविक कारण के थियो भन्ने विषयमा चन्द्रागिरि हिल्सले विवरण दिएको छैन भने प्रशासनले पनि छानबिन गरेको छैन । मंगलबार जस्तै फेरि केबुलकारमा यात्रु झुण्डिएर रोकिनु नपर्ने प्रत्याभूति नदेखिएको उद्धारकर्तामध्ये एकले नेपालीत्व समाचारलाई बताए ।